Apps Samsung Smart TV tsara indrindra (2020) - Maimaimpoana & Karama - App
Apps Samsung Smart TV tsara indrindra (2020) - Maimaimpoana & Karama
Raha mitady ny Apps Smart TV tsara indrindra ho an'ny Samsung TV ianao dia manana ny toerana mety ihany. Nandefa fampiharana Samsung Smart TV mahafinaritra izahay izay hanampy anao hahazo tombony betsaka amin'ny fahitalavitra Samsung anao.Samsung dia namaky ny baolina tao ivelan'ny valan-javaboary rehefa nanao ny fahitalavitra Smart. Miaraka amin'ny 4K, 8K OLED andian-dahatsoratra fahitalavitra 8K OLED marobe tato anatin'ny roa taona lasa izay, nanomboka nifidy an'i Samsung ny olona noho ny mitovy aminy.
Raha manana efijery afaka mandefa ny kalitaon'ny sary UHD ianao, hampiasa ny mety ananany; azonao antoka fa mila manana fampiharana sasany izay mamela anao hametraka ny kalitaon'ny horonantsary tsara indrindra an'ny Samsung amin'ny vidiny.Mizara roa izy ireo amin'ny sokajy roa- Fampiharana maimaim-poana (na maodely Freemium) sy rindrambaiko aloa.
Fampiharana fahitalavitra Smart maimaim-poana ho an'ny Samsung TV:
“TV maimaim-poana. No Strings Attached ”araka ny fiantsoan'ny Samsung azy; ity fampiharana ity dia manome seho an-jatony sy fantsona mivantana izay hanome anao antony an'arivony hisintona azy. Samsung dia nanao izay hahazoana antoka fa misy zavatra ho an'ny rehetra eto.Tsy vitan'ny Samsung TV Plus mamela anao hiditra amin'ny fandaharana sy sarimihetsika amin'ny fangatahana, fa manome anao fahefana hiditra amin'ny Live TV na aiza na aiza! Inona koa no azonao angatahina amin'ny serivisy maimaimpoana.
Ny zavatra tsara indrindra momba ny Samsung TV Plus dia ny ahafahanao miditra amin'ireo freebies rehetra ireo nefa tsy mila mametraka ny antsipirian'ny carte de crédit miaraka amin'izy ireo. Misintona ilay fampiharana fotsiny ianao, ary vonona ny handeha.Ny ankamaroan'ny fahitalavitra Samsung izay nivoaka taorian'ny taona 2016 dia manohana ny fampiharana Samsung TV Plus maimaim-poana ary fitaovana Galaxy vitsivitsy izay misy ny S10, S20, Note 10, ary ny Note 20 dia afaka mampandeha an'ity fampiharana maimaimpoana ity ihany koa.
Nanoro hevitra an'i Vudu izahay satria, fampiharana indray maimaimpoana izay hanome safidy mijery sarimihetsika sy seho an-jatony . Mandoa ihany ianao raha te hijery sarimihetsika manokana na seho iray izay tsy misy raha tsy amin'ny alàlan'ny fandoavam-bola.
Vudu dia sehatra iray namotika ny fandanjalanjana tonga lafatra eo amin'ny endri-javatra karama sy maimaim-poana avy amin'ny fampiharana hafa amin'ny Samsung Smart TV. Ny mpampiasa dia afaka manofa sarimihetsika sy fandaharana amin'ny fahitalavitra fotsiny mandritra ny 24 ora na mividy atiny; azon'izy ireo jerena amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fitaovana rehetra.
Vudu dia iray amin'ireo toeram-pivarotana lehibe an'ny ULTRAVIOLET, filma horonantsary nomerika miorina amin'ny rahona; izay mamela ny mpampiasa hamaha ireo kopian'ny nomerika Blu-Ray sy DVD novidin'izy ireo. Ny sisa ataonao dia ny mampiditra kaody hijerena ireo sarimihetsika ireo amin'ny fahitalavitra Smart anao.
Mety tsy naheno momba ity sehatra streaming ity ianao, fa minoa ny teninay; izy io dia iray amin'ireo serivisy fitaterana tsara indrindra any satria tsy misy vidiny mihitsy. Maro no mihevitra fa ny Pluto TV dia fampiharana tsy ara-dalàna izay mampiasa sarimihetsika sy seho piraty hanomezana tolotra, saingy tsy izany no izy.
Ny Pluto TV dia afaka manome votoaty maimaimpoana satria an'ny Viacom CBS no tompony, izay manana fantsona maro sy trano famokarana sarimihetsika eo ambanin'ny elany. Ary ny fampiharana dia mahazo vola amin'ny doka mety amidiny rehefa mandefa atiny rehetra ianao.
Pluto TV dia manolotra atiny maro isan-karazany; satria manome fanangonana maherin'ny 250+ fantsona mivantana misy an'izany ny NBC News, CBSN, CNN, Fox Sports, NFL Channel, Comedy Central, MTV Nickelodeon, ary Entertainment Tonight.
Ity fampiharana manokana ity dia tsy mihoatra ny fandefasana sarimihetsika sy fampisehoana mahazatra fotsiny. Tsia, tsy milaza izahay fa mandefa fantsona Alien Channels na zavatra toy izany.Plex dia manome anao fahaizana mandefa ireo rakitrao ao amin'ny Samsung Smart TV. Izy io dia azo antsoina hoe Serivisy fitantanana haino aman-jery izay manampy anao amin'ny fananganana tranokala Media anao.
Ary tsy mahazo mandefa atiny fotsiny avy amin'ny tranombokinao ianao fa afaka mijery azy amin'ny fitaovanao rehetra (izay manohana ny plex; izay ataon'ny ankamaroan'ny fitaovana). Raha hampiasa Plex dia manangana mpizara fotsiny amin'ny fitaovana iray ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fampiharana Plex Media Server ary manampy tranomboky haino aman-jery ao aminy, ary voila, tsara ianao ny mandeha.
Io dia ampiasain'ny olona manana MP3, M4A, FLAC, ary WMA manan-danja indrindra, ary antontan-taratasy maro kokoa no tohana rehefa miresaka raki-peo ary manana ny fahaizany manohana ny karazana MP4, MKV, HEVC, AVI, MOV, ary DIVX. ny fisie.Izy io koa dia ahafahan'ny mpampiasa mampiseho fisie sary JPG, PNG, RAW, ary TBN. Ankoatr'izay, Plex afaka mikoriana na dia amin'ny 4K UHD aza.
Raha YouTube no lasa motera fikarohana faharoa malaza indrindra manerantany. Vimeo dia manatratra ny kalitaon'ny atiny tena tsara.Any amin'ny toerana misy YouTube manana karazana atiny tena mavitrika sy mifangaro, ny atiny ao amin'ny Vimeo dia voatazona mankany amin'ny lafiny matotra. Raha vantany vao tonga ao amin'ny Vimeo ianao, dia ho hitanao fa anjakan'ny millennial izay te hitazona ny lafiny famoronana sy ny kanto eo amin'ny sehatra fizahana.
Tsy dia samy hafa tanteraka amin'ny YouTube ny Vimeo; manofa sarimihetsika sy seho ihany koa izy amin'ny vidiny azo zahana amin'ny alàlan'ny fampiharana azy ireo sy ny tranokala. Mba hijerena ireo zavatra farany, trending ary zavatra tsara tokony hijerena ireo mpiasa voafantina.
Tubi TV dia serivisy iray hafa izay avy amin'ny serivisy miorina ao Fremium. Azonao atao ny mivezivezy maimaimpoana amin'ny atiny Tubi Tv, saingy misy sarimihetsika an-taonina izay tsy maintsy aloanao. Azonao atao ny manofa ireo sarimihetsika ireo mandritra ny 48 ora na mividy azy ireo mandritra ny androm-piainany fotsiny.
Tsy dia be loatra ny fiasa atolotry ny Tubi TV; ao an-tsaina fa maimaim-poana tanteraka ny Tubi TV, tokony antenaina izany.Azonao atao ny mamorona playlist, milahatra ary mahazo lisitra fanoroana soso-kevitra omen'ny rafitra.
Tsindrio eto raha hampandeha ny fahitalavitra Tubi
Raha mitady zavatra ao amin'ny Cult Comedies ianao na ny horohoro na ny karazana fanadihadiana, dia afaka mahazo sary mihetsika mety tsara ianao. Ary raha zanaka am-ponao ianao na raha mpankafy sary an-tsaina sary an-tsekoly taloha ny zanakao, Popcorn Flix no fampiharana tsy tianao halaina. Izy io dia toeram-pitrandrahana volamena misy atiny mihetsika izay nanomboka tamin'ny taona 80 sy ny faramparan'ny taona 90.
Raha miandrandra alina amin'ny teatra toy ny kalitao amin'ny Samsung Smart TV vaovao ianao dia ovao ny sambo. Popcorn Flix dia mahazo kalitaon'ny sary antonony. Aza manantena na inona na inona ambonin'ny vahaolana 720P amin'ny sarimihetsika na seho.Raha vonona ny hanao sorona ny kalitaon'ny sary ho an'ny atiny lehibe ianao dia hanome sosokevitra Popcorn Flix izahay.
YouTube dia iray amin'ireo mpilalao malaza indrindra amin'ireo serivisy rehetra ao anaty lisitra. YouTube dia ampahany lehibe amin'ny Serivisy Google. Raha te hiditra amin'ny YouTube amin'ny fahitalavitra Samsung Smart anao ianao, ny sisa ataonao dia ny mampidina ny YouTube App avy amin'ny App store.
YouTube dia nanomboka nanolotra ny serivisy 'Premium'. Ity serivisy ity dia tsy handoro lavaka ao am-paosinao, ary manoro hevitra izahay fa drafitra ho an'ny fianakaviana izany hahazoana tombony fanampiny (Azonao zaraina eo anelanelan'ny kaonty google 5 hafa). Raha vantany vao azonao ny maha-mpikambana premium an'ny kaonty Google anao dia azonao atao ny mampiasa kaonty mitovy amin'ny fitaovana maro anananao.
YouTube dia manana ny haben'ny Visual Content an-tserasera ambony indrindra, hany ka mety haharitra 1.918.440 taona ianao hijerena ny horonan-tsary rehetra eo amin'ny lampihazo (Bebe kokoa no ampiana isa-minitra).Ankoatr'izay, YouTube dia manana galeriana lehibe misy horonan-tsary sy horonantsary goavambe mba hahafahanao miala voly foana.
Torolàlana hijerena YouTube amin'ny fahitalavitra
Raha toa ianao ka iray amin'ireo olona mbola mandany ny ankamaroan'ny fotoanany amin'ny Facebook dia tokony hitady Facebook Watch ao amin'ny Samsung Smart TV App Store ianao.
Facebook Watch dia serivisy Video-On-Demand ao amin'ny Facebook izay misy ny atiny Facebook ary koa atiny premium sasany. Na dia tsy misy fahitalavitra mivantana na fantsona mivantana an-tserasera aza dia mamela ny mpamorona hamorona horonantsary fohy sy lava ary mitovy amin'ny YouTube. Mifangaro mifangaro ny atiny amin'ny fiambenana Facebook, satria ny ankamaroan'ny atiny dia ampakarin'ny mpamorona tsirairay, raha ny atiny sasany noforonin'ireo manam-pahaizana manokana, ny vola aloany amin'ny Facebook.
Miaraka amin'ny Facebook Watch, ho afaka hijery ireo horonan-tsary Facebook rehetra tonga ao amin'ny kaontinao ianao nefa tsy andoavam-bola; eny, serivisy maimaimpoana io! Ny hany mila ataonao dia ny misintona ny app, miditra ary avy eo mampiditra kaody valo isa. Vantany vao mamelombelona ny kaonty dia vonona handeha ianao.
Nahita fampiharana be dia be ianao izay azonao sintonina ao amin'ny Samsung Smart TV mandefa sarimihetsika, seho ary mozika. Saingy misy zavatra betsaka kokoa amin'ny atin'ny Visual noho ireo. FunBox UHD dia fonosana feno izay hanatanteraka ny tanjonao rehetra.
FunBox UHD dia mamela anao hijery toerana tsy manam-paharoa, mamaha ny fotoana hihaonana amin'ireo olona manan-kery sy mahery. Ny sary Ultra HD dia manolotra ny antsipirian'ny zavakanto amin'ny antsipirihany sy ny loko mazava be, tsy hino ny masonao.
Ny hany olana amin'ity rindranasa ity dia amin'ny fahitalavitra Samsung voafantina ihany no misy azy. Raha tsy izany dia fampiharana tsara hijerena horonan-tsary mahafinaritra amin'ny Internet.
Fampiharana fahitalavitra voaloa na Premium ho an'ny Samsung SmartTV:
1. Ny Roku Channel
Araka ny efa nampoizinao, ny Roku Channel dia an'i Roku, mpanome tolotra mivantana. Roku Channel dia iray amin'ny toera-mpampiasa avo indrindra raha resaka serivisy tohanan'ny dokambarotra ary manome fifaninanana henjana amin'ireo serivisy mivantana toy ny Netflix, Amazon Prime Video, sy ny hafa.
Ny mpampiasa ny Roku Channel dia tia ny fomba fanamboaran'ny fampiharana ny atiny natao ho azy ireo. Ny mpampiasa dia mankafy ny tolo-kevitra atiny atolotry ny fampiharana. Miasa tsara ny algorithm ary manolotra atiny arak'izany.Na dia ampiana tsy tapaka aza ny atiny vaovao, dia manohana ny Live Sports and News Channels koa ity toa ny ABC sy Newsy. Raha manana 4K na fahitalavitra Samsung 8K Samsung ianao dia mila mitady serivisy tsara kokoa, satria tsy manana fanohanan'ny UHD ny Roku Channel.
2. Hulu (Etazonia ihany)
Hulu no anisan'ny malaza indrindra serivisy mivantana eny an-tsena ary misy antony maro mamerina azy io. Ny orinasan-tserasera Walt Disney Media dia mpiara-miombon'antoka amin'ity serivisy streaming ity, ka ho hitanao ny mahita ny sarimihetsika sy seho Disney ambony ambony, azo antoka izany.Ny iray amin'ireo antony ao ambadiky ny lazan'ny Hulu dia ny fandefasany ny fandaharana malaza aloha be raha ampitahaina amin'ireo mitovy taona aminy. Seho malaza maro no tonga ao amin'ny Hulu Network ao anatin'ny 24 ora aorian'ny fandefasana azy.
Hulu tato ho ato dia nanampy ny fampiasa amin'ny Live TV, izay hamela anao mahazo fampisehoana mivantana sy sarimihetsika avy amin'ny Samsung Smart TV. Na dia efijery roa monja aza no avelan'i Hulu amin'ny fotoana iray dia azonao atao ny mandray ny drafitra premium ($ 9.99 / volana) hahazoana efijery tsy voafetra.
Fantatray fa nieritreritra ny ankamaroanareo, nahoana no mbola tsy niresaka momba an'i Netflix izahay. Netflix dia toerana niavaka ho an'ny fialamboly an-tserasera tato anatin'ny roa taona lasa.Netflix dia efa lasa lavitra hatramin'ny nanombohany tany Etazonia tamin'ny 1998 ho serivisy fanofana DVD. Nahita fitomboana lehibe i Netflix satria nitombo ny tobin'ny mpampiasa azy tamin'ny 600k fotsiny tamin'ny 2002 lasa 4.2 tapitrisa mahery tamin'ny 2005.
Netflix dia nanolotra ny tenany ho serivisy mivantana amin'ny taona 2007 ary manana mpanjifa mihoatra ny 159 tapitrisa amin'ny taona 2019 any Etazonia fotsiny. Tsy nijanona izy hatramin'ny nahatongavany ho Serivisy mivantana lehibe indrindra manerantany.Netflix dia mirehareha amin'ny tranokala fampitam-baovao misy sarimihetsika mihoatra ny 13781 , ary mendrika zato isan-jato ny fandaniana amin'ity serivisy streaming ity; izay manolotra ny vahaolana 4K UHD ho an'ny Samsung Smart TV.
Amazon Prime Video no hany mpifaninana tsapanay, afaka manome tolona mafy ho an'i Netflix rehefa miresaka momba ny fanomezana atiny lehibe.Ny fidirana Prime Video dia miaraka amin'ny Amazon Prime Membership, izay manome anao tombony fanampiny. Azonao atao ny miditra amin'ny Amazon Prime Video, Amazon Music, tombontsoa voalohany amin'ny Amazon Shopping, ary ny Amazon Services rehetra hafa.
Ny Prime Membership dia tonga amin'ny vidiny mora vidy raha mampitahanao izany amin'ny fonosam-serivisy rehetra azonao.Miaraka amin'ny seho an-taonina sy horonan-tsary hijerena ireo trano famokarana hafa, ny Prime Video dia mamela anao hankafy ny Amazon Specials izay tsy misy afa-tsy amin'ity sehatra ity.
Midira ho an'ny Fitsarana maimaim-poana amin'ny horonan-tsary
Ny Samsung Smart TV anao dia tsy manana efijery avo lenta azonao ireharehana fa misy mpandahateny mahatahotra koa. Ka maninona raha hampiasa azy ireo hihainoana mozika madio.Ity fampiharana ity dia tsy mitovy amin'ny ankamaroan'ny Smart TV Apps amin'ity lisitra ity. Araka ny anarany, Prime Music dia fampiharana natokana hanolorana atiny am-peo. Azonao atao ny mihaino ny vaovao farany rehetra ary koa ny tranainy taloha amin'ny alàlan'ity fampiharana ity.Araka ny voalaza etsy ambony, io dia miaraka amin'ny fonosana Amazon Prime Subscription.
Raha Marvel Cinematic Universe (MCU) ianao, Star Wars, na Disney Fan; mety efa manana kaonty Disney Plus ianao. Raha izao, inona no andrasanao?Disney + dia mamela anao hiditra hijery ny atiny rehetra avy amin'ny Pixar, National Geographic (Tompon'ny The Walt Disney Media Co.), MCU, Star Wars ary maro hafa.Miaraka amin'ny fahafahanao mandefa atiny 4K, nampanan-karena ny Dolby Digital Audio izay koa amin'ny fitaovana maro miaraka amina kaonty mitovy. Disney + dia ho fampiharana tsara hanehoana sarimihetsika sy fandaharana mahafinaritra amin'ny fahitalavitra Samsung Smart anao.
Disney Plus dia combo izay azon'ny fianakaviana iray manontolo ampiasaina. Avy amin'ny kilasika Retro ka hatramin'ny sarimihetsika Superhero manomboka amin'ny MCU ka hatramin'ny sarimihetsika Disney ho an'ny ankizy. Ny olon-drehetra dia azo antoka fa hankafy ity fampiharana ity amin'ny Samsung Smart TV.Miaraka amin'ny sarany famandrihana $ 7 isam-bolana, tsy afaka miady varotra bebe kokoa ho an'ny Disney Plus ianao. Alao an-tsaina izany, sarimihetsika toa ny Avengers: Eng Game, Dr. Strange, The Mandalorian, Frozen, ary inona koa amin'ny sehatra iray ihany noho ny sarany kely kokoa.
Tsy ela akory izay nanomboka ny fotoana nanombohan'ny Apple ny serivisy mivantana; tamin'ny nanombohany, Apple koa dia nanambara anaram-boninahitra vaovao marobe ao anatin'izany ny SEE an'i Jason Momoa (izay seho tsara hijerena raha tianao ireo mpampientanentana mandritra ny vanim-potoana epic), The Morning Show, NASA Dramas ary maro hafa. Rehefa nivoaka tamin'ny taona lasa ny Apply TV plus dia tsy nisy fampisehoana 9 fotsiny hasehony, fa io isa io dia taloha. Apple TV Plus izao dia manana fandaharana vaovao 40 mahery amin'ny serivisy fandefasana azy.
Apple TV + dia tsy nanatevin-daharana ny fari-piainan'ireo mitovy taona aminy, amin'ny famafana ny atiny avy amin'ireo mpamokatra sy trano famokarana samihafa; fa nifantoka tamin'ny famokarana sy fampiratiana manokana ny atiny vaovao (Izay tsara indrindra, Netflix sy i Prime dia nameno kely ny tsena tamin'ny seho sy sarimihetsika taloha.
Miaraka amina lohateny maro hita ao amin'ny 4K, azo antoka fa ho fitsaboana azo jerena ao amin'ny UHD Samsung Smart TV anao. Apple TV Plus dia mandoa $ 5 isam-bolana, ary raha mandray ny drafitra famandrihana isan-taona ianao dia mahazo roa volana maimaim-poana, izany hoe $ 50 amin'ny famandrihana isan-taona Raha tsy azonao antoka ny atiny dia azonao atao ny manandrana maimaim-poana ny Apple TV Plus ; miaraka amina fanoloran-kevitra mandritra ny fito andro. Mety ho toa vola kely ity, nefa tadidio fa Apple TV Plus dia manolotra seho sy sarimihetsika kely dia kely azo isafidianana raha ampitahaina amin'ny hafa amin'ny sokajy mitovy amin'izany Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus.
Samsung Smart TVs dia nanjary anarana isan-tokantrano eran'izao tontolo izao ary izany no antony nieritreretanay ny hitahiry ity lisitry ny Smart Smart TV Apps ity ho an'ny mpihaino anay. Ny ekipanay dia nanandrana ny farany vitany mba hikarakara an'ity lisitra ity.Miaraka amin'ny fampiharana an-jatony mahery azo alaina, sarotra ny misafidy ny tsara indrindra; fa nanandrana ny tsara indrindra izahay, nitadidy ny filan'ny mpanjifa atiny antonony. Raha misy mandoa vola be amin'ny Samsung Smart TV, dia ilaina ny mamantatra ny ankamaroany.
Izahay dia mpanjifa aloha ary avy eo ny zavatra hafa, izany no nahafahanay nahazo an'io lisitra io.Tena manantena izahay fa nahafinaritra anao ny nandalo ilay lisitra. Toy ny mahazatra dia tianay ny mahita ny fandraisanao ireo fampiharana ireo. Raha misy aminareo manana fampiharana hafa tokony ho fantatry ny mpampiasa hafa na tiany hizarany ny zavatra niainanao amin'ireo fampiharana voalaza ireo dia alao antoka fa hilaza aminay ao amin'ilay faritra misy hevitra etsy ambany.
VPN tsara indrindra ho an'ny Disney Plus
Daty famoahana ny Fruits Basket Season 4: nofoanana ve izany! Nahoana?
Outer Banks Season 3: Daty famoahana: Nofoanana na Nohavaozina?
avadiho izay rohy mankany mp3
mijery maimaim-poana amin'ny aterineto sarimihetsika Stream
maimaim-poana amin'ny aterineto fahitalavitra mivantana andian toerana
safidy tsara indrindra amin'ny fanapahana ny tadin'ny tariby
ahoana no ahafahako mahazo disney plus maimaim-poana
manova horonantsary youtube ho audio